May anoita zvese zvitsva: zvitsva kuKosmos Verlag - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Ehezve, mugore rekuyeukwa, Kosmos Verlag haisi kuzorora pane yayo yakasarudzika pamatsutso echirimo. Zvitsva zvakawanda zvakaburitswa zvakaziviswawo muna Chivabvu. Pamusoro pezvinhu zvakawanda zvitsva muakateedzana akateedzana, kune zvakare mamwe akazvimirira magadzirirwo.
Mwedzi waMay unomirira chimwe chinhu chitsva. Maruva uye maruva zvinomera. Mitambo mitsva iri kuitika kuKosmos Verlag. Mazhinji akateedzana akateedzana ari kukura. Hechino chimwe chinhu chitsva kune vateveri ve Buda, Ubongo uye guta rangu Asi mamwe mazita akazvimirira akurawo uye akamirira kutambanudza kubva kumasherufu emitambo yakawanda yebhodhi munzira yezuva. Zvitatu zvezvitsva zvatove zviripo. Mamwe mazita anotarisirwa mukufamba kwemwedzi.
Guta Rangu Roll & Nyora - chivakwa cheguta chine cubes
Pamberi mukudonha ne MyIsland mutsivi we Guta Rangu inoburitswa, iyo Roll & Nyora vhezheni yemutambo wenhaka wakasarudzwa kuMutambo Wegore 2020 uri kuuya muna Chivabvu. Mumweya wehama yake hombe, iyo Roll & Nyora musiyano ndeyezve kugadzira maguta akasarudzika. Muzvitsauko zvina, chimwe nechimwe chine mitambo mitatu, vatambi vanofanirwa kutarisana nematambudziko matsva. Nyika inogadzirwa uye goridhe rinowanikwa. Izvi zvinounza makororo panzvimbo yekuti vatambi vatarise. Pamusoro pemitambo gumi nemiviri yakasiyana, vanoona kusimuka uye nhoroondo yeguta ravo.
Mutambo uyu unokurudzirwa kune vanhu 1-6 vane makore gumi zvichikwira. Iwe unofanirwa kuverenga nenguva yekutamba ingangoita maminetsi makumi matatu pamutambo wega wega.
Chimwe chitsva chinobva kumunyori icho vazhinji vanofanirwa kuziva kutenda kune kangaroo. MuAbracadabrien naMarc-Uwe Kling, vatambi 2-6, vane makore masere zvichikwira, vanogadzira nzvimbo dzemashiripiti mumaminetsi angangoita makumi matatu. Sezvo munhu wese achitamba panguva imwe chete, shongwe dzinosimuka zvinoshamisa nekudonha, nzizi dzinoputika uye dzinonyangarika, masango anokura uye anoshanduka. Iwe unofamba uchienda mberi nekudzoka munzvimbo yako pachako nechinangwa chekuva nemapoinzi akawanda pakupera. Iwo matatu ekuwedzera ane chipoko, kurongeka uye makadhi echiitiko anovimbisa kuwanda uye kwakasiyana kunakidzwa.
Kuzadza kaviri kune vateveri veUbongo
Kune vateveri veiyo inokurumidza puzzle game Ubongo pane zvitsva zviviri. Iyo nyowani kadhi mutambo musiyano wakafemerwa zvishoma nemitambo yedomino. Wese munhu anowana makadhi mapfumbamwe ane zvitanhatu zveUbongo zviratidzo paari. Unobva waedza kubatanidza makadhi manomwe pamwe chete nekukurumidza sezvinobvira. Kufona kwe "Ubongo" kweanomhanyisa kunopedza kutenderera kwazvino uye kunotora mapoinzi gumi. Ani nani atora mapoinzi akawanda mushure mekunge 10 rounds akunda. Musiyano wemutambo wemakadhi wakakodzera vanhu 6-2 vane makore 4 zvichikwira uye ine nguva yekutamba yemaminetsi makumi maviri. Mutambo wemakadhi ndiwo mutambo wekupedzisira weiyi rondedzero yave kuwanikwa ikozvino. Mamwe mazita ese anozobuda mwedzi uno.
Ndiani anoifarira nekukurumidza zvishoma pane iyo Ubongo kadhi mutambo, ari pa Ubongo trigo chitsvage. Pano 1-4 vatambi kubva pazera remakore manomwe vanotamba mutambo mukati memaminitsi gumi nemashanu chete. Mukusiyana uku, zvikamu zvine katatu. Nheyo yekutanga yemapuzzles panguva imwe chete inochengetwa. Pamakadhi ebasa, anowanikwa mumatanho maviri ekuoma, vatambi vanotarisana nemabasa maviri anofanirwa kupedzwa nekukurumidza kupfuura mamwe. Mushure memaround masere, mapoinzi akaunganidzwa zvakare anosarudza kuti ndiani akunda mutambo.
Pakushanya kwenyika neEXIT
Iyo yakakurumbira EXIT nhevedzano iri zvakare kuzadzikiswa padanho repamusoro. In Nhaka Yemufambi Wenyika Chinangwa ndechekugadzirisa mapuzzle nenzira inozivikanwa yeEXIT uye kutsanangura nhaka yemushakabvu Muzvinafundo Ian Jonasson. Uyu aive archaeologist uye aida puzzles. Nzendo dzake dzakamuendesa kumativi ose enyika. Vatambi vanotsvaga pfuma inofungidzirwa kuti yakarasika munzvimbo dzakasiyana siyana, decipher codes uye dudzira kunyora zvakavanzika. Semazuva ese, iyi EXIT mutambo wakakodzera vatambi 1-4 uye ine nguva yekutamba ye45-90 maminetsi. Inokurudzirwa kune makore gumi nemaviri zvichikwira.
Nezve ubongo, kune zvakare mazita maviri matsva mu Vanofungidzirwa-Row. Pano vatambi vanoperekedza mutikitivha Claire Harper uye vanofanirwa kuunganidza zvinongedzo, kubvunza vanofungidzirwa, kuferefeta chiitiko chemhosva uye kuferefeta pamwe chete kugadzirisa nyaya. Mhosva mbiri idzi dzinokurudzirwa kune makore gumi nemaviri zvichikwira. 12-1 matikitivha anoda pakati pe5 ne90 maminetsi kugadzirisa nyaya. Thematic inopinda Nzira dzinouraya kuenda kuScottish Highlands. Pano panofanira kujekeswa zvakaitika muVilla Allister. Tsvaga kuti ndiani akaponda Mary Higgins mudiki uye ndiani ari kumashure kwekutsakatika kusinganzwisisike kwemurume wake.
In Kuonekwa Kwekupedzisira vatambi naClaire Harper vanopedzisira vava muEdinburgh. Mune imwe theatre ine mukurumbira, mutambi mukuru akaurayiwa neprop panguva yekudzidzira. Nyaya yacho haiite setsaona. Kuferefeta kucharatidza kuti ndiani ari kutamba mutambo usiriwo mu "Kings Theatre".
Mumutambo wemakadhi Allie Gator Ndizvo here Chinangwa ndechekuunganidza zvishoma zvibodzwa zvisina kunaka sezvinobvira. Izvi zvinoshanda nemazvo chero uchiwana makadhi anoenderana pakati pemakadhi ako mashanu emaoko. Iwe unotamba kadhi rakakodzera uye wozodhirowa idzva. Kana pasina chinhu muruoko rwako, chibate Allie Gator uye inopa minus points. Mapenzi akakosha makadhi anogara achipa zvinoshamisa. Mutambo uyu unouya mune inoshanda "Vhura & Tamba" magineti bhokisi. Pano isu bhokisi kunhandare yekutamba. Mutambo wemhuri wekukurumidza unokurudzirwa kune vanhu 2-5 vane makore masere uye kupfuura. Nguva yekutamba inenge maminitsi makumi maviri nemashanu.
Ndapota usavhure - snappy haisi kukokwa kwekusarudza mumwe mutambo, asi musoro webhuku rakatevedzana rezita rimwechete iro mutambo wakavakirwa. Mumutambo uyu wemadhaisi emubatanidzwa wevatambi 2-4, mazera 8+, vatambi vanobatsira Oda, Fred naNemo kutsvaga imba yaYeti Icy. Sezvo kunonaya chando pakati pechirimo mutaundi diki reBoring, shamwari dzinofanirwa kutsvaga zvinongedzo guta risati radzika mumhirizhonga yechando. Mukuwedzera, Icy anofanira kutarisana nemukuru wechikoro, Mai Dr. Spargel nevavhimi vavo yeti vakavanzwa uye bvunzo dzemadhayisi dzinopfuura. A round usavhure ndapota inotamba mukati memaminitsi makumi maviri.
Pakupedzisira kune imwe paki mbiri uye vanyori veEXIT mitambo vanoonekwa zvakare. With Monster Trap Push… uye boom! chinyorwa chitsva chemuhwina mubairo muchikamu chemutambo wevana paGerman Games Prize 2011 chinobuda muzvinyorwa zvihombe nezvidiki. Iwe unofanirwa kubata zvikara mune yekare mansion. Kuti vaite izvi, ivo vanofanirwa kusundidzirwa nepakati peimba uye mumisungo yemhuka. Izvi zvinofanira kuitwa nokuti Mbuya Frieda vari pamberi pemukova uye vaizotya zvikuru kana vakaona zvikara. Nekuda kwechimiro chakangwara uye sliding mechanism, iyo hombe vhezheni, iyo yakasarudzwa zvakare kumutambo wevana wegore ra2011, inogona kutambwa nevanhu 2-4 vane makore matanhatu zvichikwira mukati memaminitsi makumi maviri. Iyo compact kutsvedza inonakidza mubhokisi diki inoda vatambi vakawanda. Inokurudzirwa kune makore mashanu zvichikwira uye inotora anenge 6 maminetsi mashoma.
KOSMOS 682248 BUDA - Mutambo - Mimvuri pamusoro peMiddle-earth,... * 14,99 EUR tenga
Kare Mobile Game: Warcraft Arclight Rumble inopatsanura vateveri
Inotevera Zvinhu zvese zvakanaka zvinouya muzvina: chitima mushure mekumhanya kwechitima muSan Francisco
Bhodhi Mutambo Wegore: 2021 inoenda kuDune - Imperium
Mhanya-uye-pfuti bhodhi mutambo Cons: Blacklist Mitambo iri kugamuchira pre-maodha
Schmidt Spiele: Mitsva yemhuri bhodhi mitambo muchirimo 2022